काठमाडौं । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह अहिले विदा मनाउन इन्डोनेशियाको बालीमा छिन् ।
यी अभिनेत्री प्रेम र रोमान्सको बारेमा जहिले चर्चामा आउँछिन् । उनको बालीमा रमाएका तस्बिर सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर पछिल्लो पटक एक युवासँग अन्तरंग रहेको तस्बिर सार्वजनिक भयो ।
को हुन् ति युवा ?
यसै पनि साम्राज्ञी प्रेमका सम्बन्धमा पनि हरेक प्रकारको चर्चामा रहने गरेकी छन् । उनको प्रेम पछिल्लो पटक देवांश राणासँग रहेको चर्चा चलिरहेको बेला सार्वजनिक भएको तस्बिरका युवा भने प्रस्ट देखिँदैनन् । के यी तिनै राणा हुन् ? यी तस्विरहरु पहिलोपटक दैनिक नेपाल डटकमले सार्वजनिक गरेको हो । यी तस्विरहरु सार्वजनिक भएसँगै यी युवा को हुन् भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ । यस विषयमा सामाग्रीले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् ।